Ijaji liyonyusa imali ekufuneka ihlawulwe ngu-Apple kwiDyunivesithi yaseWisconsin. Ukusuka kuma-234 ukuya kuma-506 ezigidi zeedola | IPhone iindaba
Ijaji liyonyusa imali ekufuneka ihlawulwe ngu-Apple kwiDyunivesithi yaseWisconsin. Ukusuka kwi- $ 234 ukuya kwi-506 yezigidi zeedola
Yonke into ibonakala ngathi ihambe kakubi kubafana baseCupertino kwesi sihlandlo kwaye emva kwempi yomthetho enzima neDyunivesithi yaseWisconsin-Madison, ijaji ephethe eli tyala. inyuse isixa ekufuneka sihlawulwe yi-Apple ukusuka kwi-234 yezigidi zeedola ukuya kwi-506 yezigidi zeedola Ukophula umthetho welungelo elilodwa lomenzi.
Ijaji uWilliam Conley waseMadison, wayephethe ngo-2015 ukuqinisekisa ukuba ukwaphulwa kwelungelo elilodwa lomenzi kwacaca kwaye wagweba inkampani ye-apile ukuba ihlawule imali yokuqala kwiDyunivesithi okanye mandithi. ukuya eWisconsin Alumni Research Foundation, isixa esingaphezulu kwezigidi ezingama-200 zeedola, kodwa ngoku akuqinisekiswanga kuphela kwisigwebo kodwa kunyuse nenani lezigidi ezimbalwa zeedola.
I-Apple yaziwa ngokuba ihlala ikula matyala omthetho kunye nabanye, kule patent ekubhekiswa kuyo kwelityala yile "yesekethe yokuxela kwangaphambili" ngaphakathi kweprosesa uqobo, evumela ukufumana ukubanjwa kwesindululo kwiscreen ngaphambi kokubamba. Yintoni ebikhona lindela iintshukumo zomsebenzisi kwiscreen ye-smartphone kwaye ke ukhawuleze kwaye usebenzise izixhobo ezimbalwa kwimisebenzi eyahlukeneyo.
Ngokwe-patent registry le ingabhaliswa nguGurindar Sohi, Unjingalwazi kule yunivesithi ngo1998 noJaji Conley, uyabaleka kwakhona ukuvumelana neWisconsin Alumni Research Foundation, ngobunini bayo. Kule meko, ukongeza ekunikezeni isizathu kwakhona, imali ekufuneka beyihlawule inyukile kuba iYunivesithi iphinde yajonga isigwebo sangaphambili kwijaji okoko izixhobo ezalandela ityala lokuqala elenziwe ngo-2014 zaqhubeka ukusebenzisa le patent kwizixhobo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » iPhone » Ezahlukeneyo » Ijaji liyonyusa imali ekufuneka ihlawulwe ngu-Apple kwiDyunivesithi yaseWisconsin. Ukusuka kwi- $ 234 ukuya kwi-506 yezigidi zeedola
UJony Ive, uthetha ngeApple Park kudliwanondlebe kwiWall Street Journal
Inguqulelo yamva nje yokufaka i-5 isibonisa yonke imixholo ecwangciswe ngakumbi